Lunatik dia manomana tranga tsy misy rano amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Mbola manana fisalasalana ve ianao raha ny Apple Watch no smartwatch ilainao? Mahasakana anao ve ilay tsy tantera-drano? Raha ny filazan'i Tim Cook azy manokana, ny Apple Watch dia mety amin'ny fandroana, fa tsy ampiasaina amin'ny pisinina. Raha toa ka manelingelina anao ity antsipirihany ity, Lunatik dia manana ny vahaolana tonga lafatra, satria nanomana tranga ho an'ny Apple Watch izay manome anao tahan'ny fanoherana rano mety ampiasaina amin'ny pisinina na amin'ny toe-javatra hafa mety lena.
Raha tianao ny kojakoja avo lenta izay manome fiarovana avo indrindra ho an'ny fitaovanao, azo antoka fa efa fantatrao ny marika Lunatik. Miaraka amin'ny katalaogin'ny tranga miaro ho an'ny iPhone sy iPad, ny marika dia antoka amin'ny fianjera, ary miaraka amin'ireo tranga tsy misy rano dia azonao lenaina na asitrikao ny iPhone tsy misy olana kely akory. Eny, afaka manao toy izany koa ianao amin'ilay nomanin'izy ireo ho an'ny Apple Watch. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika ny antsipiriany, na ny anarany sy ny sary izay lohany amin'ilay lahatsoratra ihany no fantatsika. Ny Kit Epik Apple Watch dia mbola eo an-dalam-pamolavolana ary ho hita mandritra ny volana ho avy.
Ny tranga ho an'ny Apple Watch dia tsy azo ihodivirana fa mampatsiahy nyIreo fehy amidin'ny marika Lunatik iray ihany ho an'ny iPod Nano ary novadin'izy ireo ho famantaranandro. Entana tena mpanangona izay indrisy fa nilaozan'i Apple taona maro lasa izay.
Tsarovy izany Ny 9 martsa no hetsika hanambaran'i Apple ny daty fandefasana Apple Wacth, ary koa ny fampahalalana bebe kokoa momba izany. Antenaina ihany koa fa hamoaka ny MacBook Air vaovao izy ireo, ary mety ho tonga koa ilay iPad Pro nandrasana hatry ny ela. Azonao atao ny manaraka ny hetsika mivantana amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny tranokala ofisialin'i Apple, ary eto amin'ny iPad News dia manomana ihany koa izahay ny fandrakofana manokana ataonay amin'ny Broadcast mivantana avy amin'ny bilaogy sy ny tambajotra sosialy, ny lahatsoratra miaraka amin'ny fampahalalana rehetra ary ny podcast mamakafaka ny vaovao rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Lunatik dia manomana tranga tsy misy rano amin'ny Apple Watch
Ireo headphones Galaxy S6 tafaporitsaka sy noheverina dia toa zavatra toa antsika